दशैंबाट खुल्छन् त फिल्म हल ? « Pen Nepal
दशैंबाट खुल्छन् त फिल्म हल ?
Published On : 30 September, 2020 3:07 pm By : पेननेपाल
काठमाडौं । आगामी दशैंबाट झण्डै सात महिनादेखि बन्द फिल्म हलहरु खोल्ने तयारी भएको छ । सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्डहरु पालना गर्ने गरी हल खोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव चलचित्र विकास बोर्ड सहितका निकायहरुले सरकार समक्ष राखेका छन् । प्रस्तावमा सरकार समेत सकरात्मक रहेको बताइएको छ ।